Home Wararka Jubbaland oo uga digtay odoyaasha dhaqanka iyo dadka kale xiriirka Al Shabab
Jubbaland oo uga digtay odoyaasha dhaqanka iyo dadka kale xiriirka Al Shabab
Dowlad Goboleedka Jubaland oo mudooyinka waday da’daalo lagu ciribtiraayo ururka Al Shabaab ayaa sheegtay in ay qaadayso talaabooyinka looga hortagaayo saameyn Al Shabaab ku yeelan karaan doorashada soo socota. Shir ay Kismaayo ku yeesheen golaha amniga Jubbaland, isla-markaana uu guddoomiyey madaxweyne Axmed Madoobe ayaa waxaa digniin culus loogu diray odayaasha iyo dadka kale ee la macaamila kooxda Al-Shabaab.
Kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay u diyaar garowga doorashooyinka ka dhacaya deegaanada maamulkaasi.Jubbaland ayaa sidoo kale ayaa si gaar ah odayaasha dhaqanka u fartay in aysan wax wada-shaqeyn ah la yeelan karin Al- Shabaab, maadaama la galayo doorasho guud. Sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa lagu amray hay’adda nabad sugida inay tallaab adag ka qaado cid kasta oo jabisa go’aankan ka dhanka ah la macaamilka Al-Shabaab.
Halkan ka aqriso qoraalka go’aanadii ka soo baxay shirkii golaha amniga: